उत्तम उपाय घरमै बस्‍नु- समाचार - कान्तिपुर समाचार
उत्तम उपाय घरमै बस्‍नु
काठमाडौँ — भुटानमा फागुन ६ गते नोवल कोरोना (कोभिड–१९) का पहिलो बिरामी फेला परे । उनी अमेरिकाबाट आएका पर्यटक थिए । उनी भुटान पुगेको केही दिन मात्र भएको थियो । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा उनी सार्वजनिक बस नभई ट्याक्सीमा गएका थिए । उनले धेरै मानिससँग भेटघाट नगरेका भए पनि भुटानको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमानअनुसार उनी करिब ९० जनाको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएका थिए ।
विदेशबाट फर्केका नेपालीले काठमाडौं ओर्लेपछि बस तथा अन्य यातायातका साधनमा घर पुग्ने गर्छन् । कतिपयले विमानस्थलमै आफन्तसँग भेटघाट गर्छन् भने कतिपयले घरगाउँमा । त्यसो गर्दा उनीहरूको सम्पर्क ९० जनाभन्दा धेरैसँग हुन्छ । नेपालमा भेटिएकी कोभिड–१९ की दोस्रो संक्रमितसँगै विमानमा आएकामध्ये थोरैलाई मात्र सरेको रहेछ भने पनि स्थिति भयावह हुन सक्छ । यस्तो नहोस् भन्नका लागि अहिले उपलब्ध एक मात्रै उपाय भाइरस लागेका सम्भावित व्यक्तिको नजिक नपर्नु नै हो । तर कसलाई भाइरस लागेको छ, छैन भन्ने यकिन नहुने भएकाले जो कोहीसँग पनि नजिक नहुनु सबैभन्दा राम्रो हो ।
‘जादुको छडी घुमाएर सबै अमेरिकीलाई १४ दिनसम्म एकअर्काभन्दा ६ फिट टाढा हलचल गर्न नदिई राख्न सकिने भए यो महामारी रोकिने थियो,’ महामारी विज्ञहरूलाई उद्धृत गर्दै द न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित एक रिपोर्टमा भनिएको छ ।
‘विज्ञहरू भन्छन्, यो भाइरसलाई रोक्न सकिन्छ, तर कठोर कदम चालेका खण्डमा मात्रै,’ शीर्षकको रिपोर्टमा स्वास्थ्य रिपोर्टर डोनाल्ड डी. म्याकनिल, जुनियरले लेखेका छन् । सो रिपोर्टमा अरू कुराका साथै भाइरसलाई एउटा सहरबाट अर्को सहरमा, एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा फैलन दिन नहुनेमा जोड दिइएको छ । रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘कोरोना भाइरस डरलाग्दो भए पनि यसलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने कुरा चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर र ताइवानले देखाएका छन् । तर यसका लागि गर्नुपर्ने कामका बीचमा नेताहरूले अभूतपूर्व समन्वय गर्नुपर्छ र अत्यन्त धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्छ । अनि नागरिकले अभूतपूर्व भरोसा राख्नुपर्छ र अभूतपूर्व सहयोग गर्नुपर्छ ।
अभूतपूर्व समन्वय र अभूतपूर्व लगानी गर्ने कुरा हामी नागरिकको हातमा छैन । हामी नागरिकले आफू संक्रमित नभइयोस् र आफूमार्फत अरूलाई संक्रमण नहोस् भन्ने कुरा यकिन गर्न भने सक्छौं । यसो गर्नु भनेको अरू मान्छेसँगको सम्पर्क सकेसम्म नगर्नु हो ।
त्यस रिपोर्टमा भनिएको छ, कोरोना भाइरस सबैभन्दा पहिले फैलिएको वुहान प्रान्तलाई चीनले बाँकी भागबाट पूर्ण रूपमा अलग्याएको थियो, त्यसैले भाइरस अन्यत्र ठूलो मात्रामा फैलन पाएन । अहिले कोरोनाबाट सबैभन्दा धेरै मान्छे मरेको देश इटालीले भने यस्तो काममा ढिला गर्‍यो ।
‘मानिसलाई हिँड्न नदिने नियम जति खुकुलो भयो, अस्पतालमा उति नै बढी क्षमताभन्दा धेरै बिरामी पुग्छन् र उति नै बढी मानिस मर्छन् । अर्थतन्त्र चालु हुन उति नै बढी समय लाग्छ,’ रिपोर्टमा भनिएको छ ।
बेलायतबाट प्रकाशित द गार्डियनका अनुसार, अहिले संसारका २० प्रतिशत मानिसलाई सरकारले घरबाट ननिस्कन भनेको छ । बेलायतमा बन्दको आदेश कडाइका साथ लागू गराउने तयारी गरिएको छ । ‘घरबाट बाहिर निस्कन पाउँदैनौं,’ बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले आफ्ना नागरिकलाई भनेका छन् ।
अमेरिकाको वासिङ्टन राज्यका गभर्नर जे इन्स्लीले आफ्ना नागरिकलाई गरेको सार्वजनिक सम्बोधनमा बन्दलाई भाइरससँग लड्ने एक मात्र हतियार भनेका छन् । ‘तपाईंहरू सार्वजनिक स्थानमा जति थोरै समय निस्कनुहुन्छ, त्यति बढी ज्यान जोगिन्छ,’ उनले भनेका छन् ।
कोरियामा संक्रमितलाई सरकारी आश्रयस्थलमा राखिएको थियो । उनीहरूका फmोन र त्रेडिट कार्डबाट सूचना लिएर बिरामी हुनअघि ती मानिस कहाँ–कहाँ गएका थिए, पत्ता लगाइएको थियो । त्यसपछि ती मानिसहरूसँग उनीहरूलाई संक्रमित व्यक्तिले भेटे नभेटेकोबारे फोनबाट जानकारी लिइएको थियो । संक्रमित मानिसलाई घरमै एकान्तबासमा राखिएको थियो । घरबाट बाहिर निस्कनेलाई आठ हजार डलर जरिवाना तोकिएको थियो ।
कसैलाई संक्रमण भएको छ कि भनेर दक्षिण कोरियामा मार्च ९ सम्ममा २ लाख १० हजार मानिसको जाँच गरिएको थियो । नेपालमा यस्तो जाँच हुने सम्भावना छैन । त्यसैले, नेपालमा पनि हिँडडुल गर्नमा लगाइएको निषेधको जति धेरै पालना हुन्छ, भाइरस फैलन त्यति नै कम हुने निश्चित छ ।
प्रकाशित : चैत्र १३, २०७६ ०८:१९
अमेरिकामा कोरोना संक्रमण बुलेट ट्रेनको गतिमा फैलिइरहेको छ : गभर्नर कोमो
न्युयोर्क — नोवल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण पछिल्लो समय अमेरिकामा तीव्र रूपमा फैलिइरहेको छ ।न्युयोर्क राज्यका गभर्नर एन्ड्रयु कोमोले कोभिड–१९ को संक्रमण ‘बुलेट ट्रेन’ भन्दा तीव्र गतिमा फैलिरहेको भन्दै औषधोपचार सामग्रीको आपूर्तिका लागि आग्रह गरिसकेका छन् । पत्रकारहरूसँग बोल्दै उनले संक्रमणको दर सोचेभन्दा निकै तीव्र र उच्च रहेको जनाए ।
संघीय सरकारले आवश्यक सामग्री पठाउन नसकेको उनको गुनासो छ । उनका अनुसार न्युयोर्कमा हाल कम्तीमा ३० हजारवटा भेन्टिलेटर आवश्यक भए पनि ७ हजारवटा मात्र छन् । संघीय सरकारले जम्मा ४ हजारवटा मात्र भेन्टिलेटर पठाएकोमा उनले आलोचना गरे ।
न्यूयोर्क सिटी अस्पतालमा कार्यरत एक चिकित्सकले सीएनएनसँगको कुराकानीमा स्थिति भयावह भएको बताएका छन् । दुई हप्ताअघि र अहिलेको अवस्थामा आकाश जमिनको फरक भएको पनि बताएका छन् । कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंकामा अमेरिकी अस्पतालमा मानिसहरुको भीड लागेको छ । स्रोत साधन नहुँदा आफूहरुलाई काम गर्न निकै कठिन भएको ती चिकित्सक बताउँछन्, ‘हामीसँग मेसिन छैन, हामीसँग बेड पनि छैन । भन्न त हामी न्यूयोर्कमा बसिरहेका छौँ भन्छौं तर अवस्था यस्तो छ । यहाँको अवस्था गरिब देशहरुको जस्तै छ,’ ती चिकित्सकले भने ।
तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अर्को महिना अमेरिका व्यापारका लागि खुला हुने आशा व्यक्त गरेका छन् । उनले इस्टरको खुसियालीसँगै कोभिड–१९ को संक्रमण हट्ने दाबी गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइटहाउसमा पत्रकारसँग बोल्दै ट्रम्पले ‘अमेरिकाका लागि आगामी महिना निकै सुन्दर हुने’ बताए ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, ‘हाम्रा निर्णय वास्तविक तथ्यमा आधारित हुनेछन् । इस्टर पर्वसम्ममा सबै अमेरिकीहरू आ–आफ्ना काममा फर्किनेमा म आशावादी छु । तर कुनै पनि निर्णय अमेरिकीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षामा आधारित भएर गरिनेमा म सबैलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु ।’
त्यसको केही समयमा माथिल्लो सदन सिनेट र ह्वाइटहाउसबीच अमेरिकाको अर्थतन्त्रको बचाउनका लागि २० खर्ब डलरको छुट्याउने सहमति भएको बीबीसीले जनाएको छ । उक्त सम्झौता सिनेटबाट बिहीबार पारित हुने जनाइएको छ ।
अमेरिकामा हालसम्म हालसम्म करिब ६८ हजारभन्दा बढीलाई कोभिड–१९ को संक्रमण दखिइसकेको छ । तीमध्ये २५ हजार न्युयोर्कका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले कोभिड–१९ को संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिइरहेको जनाउँदै अमेरिका प्रकोपको अर्को केन्द्र हुने चेतावनी दिइसकेको छ । बिहीबार बिहानसम्म अमेरिकामा १ हजार २७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै अमेरिकामा २४७ जनाको मृत्यु भएको छ ।
संगठनले हालसम्म ४ लाखभन्दा बढी मानिसलाई कोभिड–१९ भइसके पनि यसको संक्रमणको गति रोक्न सकिने जनाएको छ । जेनेभामा पत्रकारहरूसँग बोल्दै डब्लूएचओ प्रमुख डा. टेड्रोस एड्हानोम गेहब्रेयससले हालसम्म संसारभर ४ लाख मानिसमा कोभिड–१९ को संक्रमण पुष्टि भइसके पनि यसको गति रोक्न मानिस आफैं सजग हुनुपर्ने बताए ।
सन् २०१९ को डिसेम्बर ३१ मा पहिलो पटक देखिएको कोभिड–१९ को संक्रमण ६७ दिनमा १ लाख मानिसमा देखिएको थियो । त्यसको ११ दिनमै थप १ लाख व्यक्तिमा यसको संक्रमण देखियो । तर अर्को १ लाखमा भने चार दिनमै ३ लाख पुग्यो ।
‘आइसोलेसनको विकल्प छैन’
गेहब्रेयससले मानिसलाई हिँडडुलमा मात्र रोक लगाएर यसको प्रकोपबाट बच्न नसकिने प्रस्ट पारेका छन् । उनले प्रत्येक संक्रमण परीक्षण गरेर तथा संक्रमितको सम्पर्कमा पुगेका सबैलाई आइसोलेसनमा राख्नु कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।
गेहब्रेयससले फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुएल म्याक्रों र उनका चिनियाँ समकर्क्षी सी चिनफिङले आह्वान गरेको जी–२० समूहको आकस्मिक शिखर सम्मेलनमा डब्लूएचओलाई पनि बोलाइएको बताए । उनका अनुसार कोभिड–१९ थप फैलन नदिन तथा नियन्त्रणका उपायबारे पनि बैठकमा छलफल हुनेछ ।
यसैबीच, संयुक्त राष्ट्रसंघले कोभिड–१९ को फैलँदो प्रकोपसँग जुध्न विश्वका जुनसुकै स्थानमा जारी द्वन्द्वका पक्षलाई युद्धविराम गर्न आह्वान गरेको छ । राष्ट्रसंघ महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले ७५ वर्ष लामो राष्ट्रसंघको इतिहासकै कोभिड–१९ अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकटका रूपमा देखिएको जनाए ।
गुटेरेसले विश्वका गरिब तथा द्वन्द्वको स्थितिमा रहेको देशका मानिस सबैभन्दा नराम्ररी प्रभावित हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले विकसित देशका नेताहरूलाई तत्काल र संयोजित प्रतिक्रिया देखाउन एकताबद्ध हुन आह्वान गरे ।
आर्थिक मन्दीको त्रास
विश्वका अग्रणी अर्थतन्त्र तथा वित्तीय संस्थाहरूले कोभिड–१९ का कारण संसार हुन सक्ने लामो आर्थिक मन्दीबाट जोगाउन सहयोगका लागि आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् । अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले ऐतिहासिक कदम चाल्दै कर्पोरेट ऋण किनिदिने तथा घरेलु सापटी प्रवाहलाई भरथेग गर्ने जनाएको छ ।
जर्मनीले आफ्नो अर्थतन्त्रमा परेको असर कम गर्न ८ सय अर्ब डलर खर्च गर्ने घोषणा गरेको छ । विश्व बैंकले विकासोन्मुख देशहरूलाई कोभिड–१९ को प्रकोपको मार थेग्न १ सय ५० अर्ब डलर सहायता दिने जनाएको छ ।
प्रकाशित : चैत्र १३, २०७६ ०८:१५
गण्डकीमा प्रदेश प्रहरी गठनको बाटो खुल्यो
'गोल्ड मेडलिस्ट' अध्यापकलाई १४ महिना कैद
कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्न महानगरको सिफारिस
आठ दिनपछि सम्झना कामीको अन्त्येष्टि